के छ त खोटाङको शिक्षास्तर सुधार्ने योजना ? जिशिअलाई हाम्रो प्रश्न ! - Hamrokhotang
Home » Serofero » के छ त खोटाङको शिक्षास्तर सुधार्ने योजना ? जिशिअलाई हाम्रो प्रश्न !
के छ त खोटाङको शिक्षास्तर सुधार्ने योजना ? जिशिअलाई हाम्रो प्रश्न !
काठमाडौं १५ मंसिर । गत असारमा प्रकाशित एसएलसीको नतिजा अनुसार खोटाङका ९० मावि विद्यालयमध्ये १४ विद्यालय निलसहित एसएलसीमा देशकै सबैभन्दा कमजोर नतिजा ल्याउने जिल्ला बन्न पुग्यो खोटाङ ।
अझै रोचक त के छ भने नेताहरु नै प्रधानध्यापक तथा अध्यक्ष रहेका स्कुलहरुले नै जिरो नतिजा ल्याए ।
खोटाङ जिल्ला एसएलसी नतिजामा ७५ औं स्थानमा जानुको मुख्य दोष शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, खोटाङका बुद्धिजिवि तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जान्छ ।
गत वर्षको नतिजामा खोटाङ ७५ औं जिल्लामा पुगेपछि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दै सभाषद विशाल भट्टराईले अभियान समेत सञ्चालन गरे तर त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको छैन ।
तत्कालिन अवस्थामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी (जिशिअ) गणेश प्रसाद भट्टराई रहेका थिए । अहिले भने जिशिअको पदमा करिब दुई महिनादेखि खोटाङ मात्तिमका केशव दाहाल आएका छन् ।
जिल्लाबासी भएकाले पनि गत वर्षको एसएलसीको नतिजाप्रति उनले निक्कै चित्त दुखाए । उनलाई हामीले के छन् त खोटाङको शिक्षास्तर सुधार्ने योजना भनेर प्रश्न गर्दा, शिक्षा नीतिका अलवा जिरो नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर गुणस्तर सुधार्न के गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर छलफल गरिरहेको, स्रोत व्यक्तिहरुलाई सक्रियका साथ काम गर्न लगाएको तथा छड्के चेकिंगलाई पनि सक्रिय बनाएको लगायत सुनाए ।
उनले विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार्न १० बजेदेखि ४ बजेसम्म निरन्तर पढाई हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । जिशिअ दाहालले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न विद्यालयको अनुगमन स्थानीय तहबाट नै बढी हुनुपर्ने भन्दै अभिभावकलाई सक्रिय भएर लाग्न आग्रह समेत गरेका छन् । 'हामीले गर्ने अनुगमन सेम्पलिंग जस्तै मात्र हुन्छ,' उनले भने, 'प्रभावकारी नतिजा ल्याउने हो भने स्थानीय तहबाट नै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ, हामीले पनि सक्ने काम गरिरहेका छौं, यो तपाई हामी सबैको काम पनि हो ।'
उनले भौगोलिक अवस्थाका कारण जिल्ला शिक्षाबाट सबैतिर सक्रियताका साथ अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार समेत गरेका छन् । 'जनशक्ति कम छ, भौगोलिक अवस्थाका कारण सबैतिर अनुगमन गर्न सकिने अवस्था छैन' उनले हाम्रोखोटाङ डटकमसँग भने, 'यसमा अभिभावकले अलिकति सक्रियता बढाएर विद्यालय निरन्तर सञ्चालन गर्न दबाब दिनु हो भने हाम्रो जिल्लाको शिक्षाको गुणस्तर धेरै सुध्रने देख्छु ।'